Otu ihe nchọgharị ga-ewe ahịa! | Martech Zone
Satọdee, Nọvemba 18, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'abalị ụnyaahụ, a na m arụ ọrụ na nnukwu post - mkpokọta njikọ m achọpụtala n'ime izu ole na ole gara aga m chọrọ igosi unu niile. Achọrọ m ịgụta ọnụ ọgụgụ na 10 naanị iji mee ya 'Top 10'.
Achọpụtara m ibe edokwubara m echekwara wee dee obere okwu nkoropụ maka nke ọ bụla ga-adọrọ uche gị ma mee ka ị maa jijiji. Mgbe emechara njikọ ọ bụla, m ga-emepe taabụ ọhụrụ (m na-eji Firefox), gaa na ibe edokọbara m, wee mepee njikọ ahụ. O nwere ike ịbụ na ị maraworị ihe mechara mee. M pịrị na ibe m ma mepee saịtị ọhụrụ ahụ na taabụ ebe ọkwa m mechara 90%.
NOOOOoooooooooooo! M pịa Kwụsị. M pịrị azụ. M pịrị UNDO. Ọ gafeela.
Nke a bụ na post Nke a bụ post nke ga-eme m kpakpando ntanetị. Ederede nke ga-emechi akara akwụkwọ m. Edemede nke ga-enwe ọtụtụ puku trackbacks, mee nke kacha elu Digg, ma tinye m na Technorati Top 100. Mana agaala.
Yabụ ebe a ọ bụ… otu ihe nchọgharị ga-eri ahịa niile. Formdị-on-the-fly-save-na-dozie-nzuzu-pịa-na-m-mere-nke ahụ-m-apụtaghị ịpị. Enweghị m aha na-adọrọ adọrọ, egbusiri m amamihe m niile na njikọ njikọ m niile. Aghọtaghị m ihe kpatara na kọmputa enweghị ike ịme nke a, n'agbanyeghị. Ọ bụrụ na keyboard gị bụ ngwaọrụ ntinye, mkpụrụedemede nwere ike ịpụta na ihuenyo, gịnị kpatara (OH WHY !!!) kọmputa enweghị ike icheta ihe ị dere na mpaghara ederede 1.8 sekọnd tupu ọ gbanwee peeji ahụ na mberede.
Ya mere, ebe ị gara Mozilla, Microsoft, Opera… nke ahụ bụ njirimara m ga - ahụ gị n'anya ruo mgbe ebighi ebi. Biko, biko tinye ya na mwepụta gị ọzọ. Biko.
Kedu ihe kpatara ndị ọrụ dị ukwuu ji ahapụ? Kedu ihe kpatara nnukwu ụlọ ọrụ ga-eji were n'ọrụ?
Nov 19, 2006 na 10:02 AM
Nke a bụ ihe kpatara m ji eji mmemme Blogjet. Etufuru m na ọtụtụ posts n'ihi "hiccups" na ihe nchọgharị ahụ.
Ihe mgbakwunye agbakwunyere iji blogjet bụ na ị nwere ike ịchekwa ederede ederede na mpaghara gị na draịvụ ike gị. Gbakwunye ihe oyiyi bụkwa ikuku.
E nwere ụdị sọftụwia ndị ọzọ, ecto na-abata n'uche, mana lee ya anya. Chekwa otu akwụkwọ akụkọ bara uru maka nnabata.
Nov 19, 2006 na 11:06 AM
Biko akpọkwala Blogspot asị n'ihi na ọ mara mma… love ga-ahụrịrị ya n'anya-ọrụ-gị-na-na-na-ada…
Ma ọ bụ, ịnwere ike ide akwụkwọ gị na Google Docs nke nwekwara arụmọrụ nchekwa onwe.
Nov 19, 2006 na 4:55 PM
Eehm… achọghị ịpinye ya, mana Opera nwere atụmatụ a nwa oge - ebe Opera 7 IIRC. Contentdị ọdịnaya ga-echekwa ruo mgbe ị mechiri taabụ, wee pịa 'Azụ' ga-eweghachite ọdịnaya nke ụdị mpempe akwụkwọ. Oge kacha ọhụrụ nke ndị ọzọ, Firefox 2.0 na MSIE 7.0 na-enyekwa nke a ugbu a, na -eyingomi site na onye ọhụụ ahụ 🙂
Ihe nwere ike ịgahie, ọkachasị na MSIE na Firefox, ma ọ bụrụ na ngalaba ikpegara gị dị na ibe na-egbochi mkpuchi. Opera na - akparịta ụka karịa, na --echekarị peeji a na ịpị 'Azụ'.
Nov 19, 2006 na 6:32 PM
Nke ahụ bụ nzaghachi dị egwu! Daalụ, onye ọ bụla!
Tom: Agara m Blogjet, dị mwute ikwu na ọ dịghị Mac version. 🙁 Ọ dị ka nnukwu obere ngwa, agbanyeghị!
William: Enwere m blọọgụ m na blogspot obere oge. Enwere m mmasị na ya mana ozugbo m malitere ịdọrọ uche ụfọdụ, achọrọ m ngalaba nke m. Achọghị m Blogger ka ọ 'nwee' mụ na ọdịnaya m. Amaghị m na ha nwere njirimara ahụ, n'agbanyeghị. Aga m eme ụfọdụ ile anya wee hụ ma m ga - ahụ ụdịrị atụmatụ ahụ maka WordPress.
RIJK: knewnye maara? Daalụ nke ukwuu maka ịkọrọ m nke ahụ. Aga m ebudata Oke 9 ma lee otu m masiri ya!
Dee 2, 2006 na 1: 04 AM
Enwere m echiche nke ihe ga-ekwe omume mmezi nye nsogbu gị. Nwere ike ịwụnye igodo osisi iji jide ihe niile igodo gị. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ịnyagharịa ụdị mpempe akwụkwọ edechara, ị nwere ike mepee faịlụ ndekọ igodo gị wee chọta ihe niile ị pịnyere.
Enweghị m obi ụtọ ịnweta mac, mana ejiri m n'aka na ị nwere ike ịchọta igodo igodo n'efu maka ya. Nke a bụ nke m hụrụ site na ngwa ngwa Google:
(mba, anaghị m arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ ahụ!)